Zakarie Abdi – Page 113 – Filimside.net
R Madhavan oo la ogaaday sababta uu isaga baxay sameynta filimka Simmba ee Ranveer hogaamiye ka yahay
Waxaa horey loo sheegay jilaaga R Madhavan inuu door muhiim ah ku yeelan doono Director Rohit Shetty filimkiisa Simmba ee Ranveer Singh hogaamiye ka yahay. Balse hadda R Madhavan mashruucaan Action-ka ah wuu isaga baxay weliba asigoo […]
Ruug cadaa Jackie Shroff ku dhawaad 40-sano ayuu fanka Hindiya ka tirsan wuxuuna haatan sheegay inuu ku faraxsan yahay wiilkiisa Tiger Shroff hanaanka uu ku socdo mustaqbalkiisa Bollywood-ka. Jackie ayaa sheegay inuusan marnaba iska diidin […]
Shirkada Bollywood-ka waxay sameysaa aflaan daawadayaasha lagu mada daaliyo galiyo si ay taas u dhacdo waa qasab in goobo qurux badan aflaanta lagu duubo qarash walbo oo ku baxaayo. Hadaba waxaan idiin heynaa goobo caan […]
Kaartadii 7-aad Ee Filmka Race 3 Oo Lasoo Bandhigay Waxayna U Gaar Tahay Anil Kapoor!
Waxaa si rasmi ah loo soo bandhigay kaartada ama aragtida todobaad ee filimka Race 3 taasi oo gaar u ah Superstar Anil Kapoor iyo doorkiisa Shamsher. Anil Kapoor marnaba kama maqnaan taxahana Race asigoo horey labadii […]
Rasmi: filimka Hichki iyo sabtigiisa kowaad ama maalintiisa labaad ganacsiga uu sameeyay
Rani Mukerji filimkeeda Hichki ayaa sare u kac wacan sameeyay oo ah 60% maalintiisa labaad wuxuuna keenay 5.25 Crore taasi oo ka dhigan ganacsigiisa labo maalmood wadar ahaan inuu yahay 8.50 Crore (Trade Figure). Hichki wuxuu ku socdaa […]
Maqaal: Superstar-ka aan loo heesin lana buun buunin balse Khans-ka ka mug weyn (Sunny Deol)
Hordhac: Sunny Deol marka aad maqashid Bollywood ahaan waxaa kagu soo dhacaayo Action adag, canaan kulul iyo filim qiiro badan! Laakiin inta badan marka aan maqalno ereyga Superstar, waxaan bilaawnaa inaan ka fikirno Amitabh Bachchan, Rajesh Khanna, Dilip […]
« 1 … 112 113 114 … 323 »